Kooxda Dalxiiska Dalxiis ee Pacific Resort ayaa bilaawday Xadka Khamriga Gaarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Kooxda Dalxiiska Dalxiis ee Pacific Resort ayaa bilaawday Xadka Khamriga Gaarka ah
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Ku Saabsan Jasiiradaha Cook • kariska • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Khamriga & Ruuxa
Jaleecada hore, waxaa laga yaabaa inaadan aqoonsanayn iskumid ahaanta udhaxeysa Gisborne, New Zealand iyo jasiiradaha Cook Islands. Si kastaba ha noqotee, markaad si dhow u fiirsato waxaad bilaabi doontaa inaad dareento isbarbardhigyo hoose; fiditaan dheer oo xeebo ciid ah oo cadaan ah, cimilo qorax leh oo la jeclaan karo, safaf dhaadheer oo qurux badan, iyo si aad u wada sareysid, dadka deegaanka oo saaxiibtinimo leh oo had iyo jeer ku dadaala sidii ay u hubin lahaayeen khibrad aanad iloobi doonin si deg deg ah.
Xeebta Bari ee Jasiiradda Waqooyiga New Zealand, Gisborne waa gobolka afaraad ee ugu weyn ee khamriga ka baxa; guri ay ku dhex milmaan soosaarayaasha khamriga waaweyn, khamriga khamriga, iyo beeraleyda ganacsiga. Waa halkan waxaad ka heli doontaa abaalmarinta ku guuleysata beerta canabka ah ee Longbush iyo khamriga, qoys ay leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan shirkad ku takhasustay khamriga wanaagsan.
Bishii Luulyo, 2018, Longbush waxay ku biirtay xoogagga abaalmarinta ku guuleysatay Pacific Resort Hotel Group (PRHG), si loo soo saaro khamri kala duwan oo gaar ah oo loogu talagalay qaybinta guryaha Cook Islands. Milkiilaha Longbush, John Thorp, wuxuu leeyahay "had iyo jeer waxaa jira horumarro cusub oo xagga ganacsiga ah, qaabab cimilo kala duwan oo saameynaya goosashada iyo suuqyo cusub oo la baaro".
PRHG iyo Longbush waxay ku raaxaystaan ​​isbahaysigooda dabiiciga ah. Buurta Gisborne waxay u dhaxeysaa waqooyiga iyo waqooyi-bari hoyga gobolka, halka cimilada qallalan isku mar la qaboojiyo xagaaga waqooyiga bari ee hawadu ka socoto Badweynta Baasifigga. Carrada bacriminta ee Gisborne ayaa si wanaagsan uga faa'iideysata xaaladaha cimilada iswaafajinta natiijaduna waa jawi ku habboon koritaanka iyo soo saarista khamri heer caalami ah.
In ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha, Thorp wuxuu keenayaa waayo-aragnimo iyo aqoon badan si loo soo saaro khamri tayo leh. Kooxda Thorp ee khamri-sameeyeyaasha ayaa adeegsaday awooda gobolka Gisborne si ay u soo saaraan baaxad ay ku jiraan Merlot-Rosé, Pinot Gris, iyo Merlot martida PRHG si ay u dhadhamiyaan.
PRHG iyo Longbush waxay si qoto dheer ugu abtirsadaan beeshooda isla markaana dareenka qoysku wuxuu udub dhexaad u yahay wadayaasha dukaamada. Waxay u muuqatay kaliya inay ku habboon tahay in la magacaabo khamriga ku xeeran fikradda bulshada; Muaua, Nōku, iyo T'a'au. Māua, oo laga tarjumay Cook Islands Maori macnaheedu waa ka tirsanaanteena, waa firfircoon oo si qurux badan loo qaabeeyey Merlot-Rosé; Nōku, anigaa iska leh, waa Pinot Gris cajiib ah oo isku dheelitiran, halka Tā'au, oo adiga iska leh, uu yahay Merlot jir dhallinyar, macaan iyo dhabanno leh.
Qiyaasta ayaa hada laga heli karaa janada yar ee jasiiradaha Cook waxaana ku raaxeysanaya martida guryaha PRHG.